आज सवा १२ अर्ब ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुदैं, के हो ट्रेजरी बिल ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
काठमाडौं –नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १२ अर्ब २६ करोड बराबरको ’ट्रेजरी बिल’ बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज आइतबार बोलकबोलबाट उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । आइतबार बोलकबोल भएर मंगलबार ट्रेजरी बिल इस्यु हुने बताइएको छ ।
साथै, ट्रेजरी बिलमा ब्याजदर भन्दा पनि सट्टा छुटदर माथि बोलकबोल हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा वित्तिय संस्थाले सरकारलाई रू। १ करोडको ट्रेजरी बिल किन्दा छुट सहित ९५ लाख दिन सक्छन् । तर, पछि उनीहरुले अवधी सकिएपछि एक करोड रुपैयाँ नै पाउछन् ।
चर्को विरोधपछि युरोपियन सुपर लिगमा सहभागिता निश्चित गरेका प्रिमियर क्लवका ६ क्लबले गरे नाम फिर्ता